Terms uye Conditions - Cash Drop 200 X £ 10 yechiGypsy Moon Theme
Terms uye Conditions – Cash Drop 200 X £ 10 yechiGypsy Moon Theme
200 mibayiro yevanhu £ 10 pachaiswa kupinda richakunda nyaya panguva 12PM China 16th February 2017 (BST) uye kucharatidza kutanga giveaway.
GMT rinoenderana ACST -9.30hrs, -1hr INO, PTZ + 8hrsCash inofanira kwakauraya nokuda 12PM neChitatu 22nd February 2017 (GMT) kuburikidza kudzikinara zvose kana zvimwe bhonasi chikwereti.
Kana nokuda 12PM Wednesday (GMT) 22wana, ari paakavapa nhoroondo vasina wagered pamusoro paIndaneti mutambo, ari playing anekodzero dzinodzora uye apiwa mubayiro mubayiro.
The mibayiro vachava 200 batch pamusoro £ 10 Mubayiro paakavapa mune mari. Izvi chikwereti chinogona kutorwa pakarepo.
The Kukwidziridzwa kuchanyarara panguva 12PM (GMT) neChitatu 22nd February 2017 Cash mibayiro vachapiwa paakavapa mhiri Nektan networkTo akwanise kupinda ari mutambi kunge Logged nyaya kubva 1st March 2016.The playing reserves kodzero vasabhadhara chero promotional mubhadharo kana anotenda kuti kukwidziridzwa ashungurudzwa uye / kana apo okuti ari kupa havasi kuzadzika.